Indlela Yokugwema Iibhokhwe Zokulala Xa Uhamba
Indlela Yokuphepha Iibhokhwe Zokulala Kwiihotele
Iibhogi zebhedlele zazibe yinkathazo yexesha elidlulileyo, kodwa zenze i- backback ephawulekayo kwiminyaka yamuva. Izimbulana ezimbalwa zeembhobho ezithintekayo kwimithwalo yakho zingaqalisa ukuhlaselwa ngokupheleleyo kweentlobo ezinambuzane zegazi kwikhaya lakho.
Zibukeka Njani Iibhokhwe Zokulala?
Iibhugi ezikhulayo zabantu abadala zimeyile kwaye zibomvu okanye zibomvu ngombala. Iibhugi ezingapheliyo zokulala zihlala zikhanyisa ngombala. Iibhugi ezibhede zihlala zihlala kumaqela, ngoko ke apho kukho enye, kunokwenzeka ukuba ininzi.
Ezinye iimpawu zokuba izibhedlele zebhedi zikhoyo zibandakanya amanqaku amnyama amaninzi kwiilenens okanye ifenitshala (inkunkuma) kunye nemibhobho yesikhumba esibomvu esikhumbeni.
4 Iingcamango eziqhelekileyo malunga neebhokhwe zebhedlele
Ukucinga nje ngeembhobho zokulala kungenokwanela ukwenza isikhumba sakho siphume (ngokoqobo!), Kodwa kubalulekile ukuba uqonde izinto ezimbalwa ngalezi zinambuzane kunye nemikhwa yabo.
Iibhugi zebhedlele azidlulisi izifo kwaye aziqhelwanga njengengozi kwimpilo yakho. Njengaye naziphi na izilwanyana ezilumayo, iibhegi zokugaya izibhedlele zingabonakala, kwaye ulusu loluntu lunokuba lukhuni ngakumbi kunabanye.
Iibhugi zebhedlele aziyiyo imveliso yocingo. Baya kuhlala kulo mzi ococekileyo kumakhaya. Musa ukucinga ukuba indlu yakho okanye igumbi lakho lehotele licocekile ukuba lingene kwiibhugi zokulala. Ukuba kukho into ekudliwayo (ngokuqhelekileyo wena), iibhugi zokulala ziza kuvuyiswa kwinqanaba leenkwenkwezi ezi-5 njengoko ziza ku-motel ephantsi.
Iibhugi zebhedlele zihlwa. Oko kuthetha ukuba baya kubonisa ubuso babo ebusuku xa kulungile kwaye kumnyama. Ungalindelanga ukuhamba egumbini lehotele ekukhanyeni kwemini uze ubone iibhogi zokulala ezihamba ngeendonga.
Iibhugi zebhedlele zincinci. Iibhugi zabantu abadala zibonakala kwiso iso kodwa uzakufuna iglasi yokukhawulela ukujonga amaqanda. Ngenxa yokuba bancinci, iibhugi zihlala zifihlile kwiindawo ongeze ucinge ngazo.
Ngethamsanqa, kuninzi onokukwenza ukuze unciphise amathuba akho okuzisa ikhaya leebhugi ekhaya ukusuka kwiholide lakho elizayo okanye uhambo lwezorhwebo.
Yintoni oPhando ngaphambi kokuba uhambe
Ngaphambi kokushaya kwindlela elandelayo kwiholide okanye uhambo lwezoshishino, yenza umsebenzi wesikolo sakho. Abantu bakhawuleza ukwabelana ngamava abo ohambo kwi-intanethi, ngokukodwa xa kuziwa kwiibhugi zokulala kwindawo yamagumbi ehotele. IiWebhsayithi ezinjenge-Tripadvisor, apho abathengi bezitshintshi zabo iihotele kunye neendawo zokungcebeleka, zixhobo ezixabisekileyo zokubona ukuba ihotele yakho inenkinga yesibhedlele . Unokujonga kwakhona i-bedbugregistry.com, i-database ekhompyutheni eyenza iingoma zichazwe kwiibhedlele zebhedlele kwiihotele nakwiindawo zokuhlala. Umgca ophantsi - ukuba abantu bathi bakubonile iibhugi zokulala kwihotele ethile okanye kwindawo yokuhlala, musa ukuhlala apho ohambweni lwakho.
Indlela yokuPakisha ukuKhusela iibhokhwe zeBhedi
Sebenzisa izikhwama ezisikwayo ze sandwich . Ngale ndlela nangona usuphelela egumbini kunye neentlanzi zakho izinto ziya kukhuselwa. Zenzele ukubonelelwa kakuhle kweebhangi ezinkulu (ubukhulu bamagolon asebenze kakuhle), kwaye unamathele konke onakho ngaphakathi kubo. Izambatho, izicathulo, izindlu zangasese, kunye neencwadi zinokuthi zenziwe ziqinile. Qinisekisa ukuba utywine i-baggies ngokupheleleyo, njengokuba nevulo elincinci lingavumela i-bug bed bendingelayo ukungena. Xa uhlala kwigumbi lakho lehotele, gcina iiggs zivale ngaphandle kokuba ufuna ukufikelela kwinto ngaphakathi.
Sebenzisa umthwalo onzima. Imithwalo yembatho yombatho inikeza izibhedlele zebhedi ezifihlakeleyo ezigidi.
Umthwalo ongenamacala ongenamacandelo awunayo iifolthi okanye iindawo zokuhlala apho iingcambu zebhedi zifihla khona, kwaye zivale ngokupheleleyo, kungekho zikhefu ukwenzela ukuba izinambuzane zingenako ukungena ngaphakathi.
Ukuba kufuneka usebenzise imithwalo enesithambathiso sokuhamba uhambo lwakho, izikhwama ezinombala ezikhanyayo zibhetele. Iibhogi zebhedlele ziza kuba nzima ukubonakala kwiebhasi ezimnyama okanye ezimnyama.
I-pack clothin g elula ukuyifaka. Gwema iimpahla zokupakisha ezinokuhlanjwa kuphela emanzini abandayo. Ukuhlamba emanzini atshisayo, ke ngokumisa ngokushisa okuphezulu, wenza umsebenzi omhle wokubulala zonke iibhugi ezibheke ekhaya ezambathweni, ngoko uya kufuna ukukhetha izambatho ezinokuthi zibuke lula xa ubuya.
Indlela yokuhlola Igumbi lakho leehotele zeeLibhulo zeBhedi
Xa ufika ehotele okanye kwindawo yokuhlala, shiya imithwalo yakho kwimoto okanye nge-bellhop. Ngaba ufanele uhambe uze ufumane igumbi elijongene neembhobho zokulala , awufuni ukuba izinto zakho zihleli phakathi kwe-infestation.
Musa ukufaka iingxowa zakho egumbini de uze wenze uvavanyo olufanelekileyo lwebhegi ye-bug.
Iibhugi zokulala zifihla ngexesha lokukhanya kwemini, kwaye zincinci, ngoko ke ukuzifumana kuthatha umsebenzi omncinci. Ingcamango enhle yokuphatha i-flashlight encinane xa uhamba ukusuka ekubeni izibilini zebhedlele ziza kuba zifihlile kwiindawo ezinzima kakhulu kwigumbi. Ikholeji ye-LED yecandelo yenza ithuluzi elikhulu lokuhlola i-bug.
I-sulfure ebudlelwaneni obungabonakaliyo iya kubangela ukuba izibhamu zibalekele. Qalisa umdlalo ongenagqityiweyo kwi-seam ye-mattress ukwenzela ukuba izikhumba zingabonakali.
Kuphi Ukujonga Xa Kuhlolwe Igumbi Leehotele zeeBhotile zeBhedi
Qala ngebhedi (zibizwa ngokuba zizibhedlele zebhedi ngesizathu, emva koko konke). Jonga iilenens ngokufanelekileyo nayiphi na impawu yeembhobho zokulala, ngokukodwa ezijikeleze nayiphi na iiplanga, ukubhobhoza okanye ukubola. Ungakulibala ukuhlola ukuthungatha uthuli, indawo efihlakeleyo yeebhugi zokulala ezithandwayo.
Phinda ubuyise amaphepha, uphinde uhlole i-mattress, uphinde ujonge ngenyameko nakweyiphi na i-seams okanye ipayipi. Ukuba kukho ibhokisi entwasahlobo, khangela iibhugi zendawo yokulala. Ukuba kunokwenzeka, pha kamisa nganye ikona le-mattress kunye nebhokisi entwasahlobo kwaye uhlole isakhelo sebhedi, enye indawo efihlakeleyo yokukhusela iibhegs.
Iibhugi ezinobhedlele nazo zihlala ezikhuni. Qhubeka uphononongo ngokuhlola nayiphi ifenitshala okanye ezinye izinto ezikufutshane nombhede. Uninzi lweembombo zebhedlele zihlala ngaphakathi kufuphi nombhede. Ukuba unako, hlola emva kwebhodibhodi, edlalwa kwindonga kumahotele ehotele. Kwakhona, jonga emva kweefowuni zezithombe kunye nezibuko. Phuma naluphi na umgca, usebenzisa i-flashlight yakho ukuba ubuke ngaphakathi kwisigqoko kunye nobusuku bokuhlwa.
Yintoni Oyenzayo Ukuba Ufumana Iibhulodi KwiGumbi Lamahotele Wakho?
Hamba ngokukhawuleza kwidesksi phambi uze ucele igumbi elithile. Tshela ulawulo lobuphi ubungqina bebhegi obufunyenweyo, kwaye uchaze ukuba ufuna igumbi elingenamlando weengxaki zebhedlele zebhedi. Ungavumeli ukuba bakunike igumbi elisecaleni kwigumbi apho ufumene khona izibhedlele zokulala (kubandakanywa namagumbi angentla okanye ngaphantsi kwayo), njengoko iibhugi zokulala zingakwazi ukuhamba ngokugqithiseleyo ngomsebenzi wokusebenza okanye udonga lwamadonga kumagumbi afanelekileyo. Qinisekisa ukuphinda uhlolo lwegciwane lakho lokulala kwisigumbi esitsha, naye.
Ngoxa uhlala e-Hotel
Ngenxa yokuba awufumani nayiphi na iibhugi zokulala, akuthethi ukuba abakho. Kunokwenzeka ukuba igumbi lakho linokuthi libe neentsholongwane, ngoko thabatha amanyathelo athile okukhusela. Ungalokothi ubeke umthwalo wakho okanye izambatho zakho phantsi okanye kumbhede. Gcina iibhegi zakho kwimithwalo yomthwalo okanye phezulu kwengubo, ephantsi. Gcina nayiphi na into, ingasetyenziselwa ukutywinwa kwiiggs.
Indlela yokukhupha kwihambo lakho kwaye ubulale onke ama-Bugs Bed Stowayway
Emva kokukhangela ihotele, ungathatha amanyathelo okugcina nayiphi na iibhugi ezingabonakaliyo ezivela ekhaya. Ngaphambi kokuba ubeke imithwalo yakho kwimoto ukuya ekhaya, yifake kwisikhwama esikhulu senkunkuma yeplastiki kunye nephulo ityiwe ngokuqinile. Xa ufika ekhaya, cima ngokucophelela.
Zonke izambatho kunye nezinye izinto ezinokutsha zikarhulumente kufuneka zihlanjululwe ngokukhawuleza kumanzi ashushu kakhulu avumelekileyo. Izambatho kufuneka zomeke ngokushisa okukhulu ubuncinane imizuzu engama-30. Oku kufuneka kubulale nayiphi na iibhugi zokulala ezikwazi ukuhlahlela.
Ukukhupha izinto ezingenakuhlamba okanye ukutshiswa. Izinto ezingenako ukutyhila kumanzi okanye ukufudumala kunokushushulwa kunqabile endaweni, nangona oku kuthatha ixesha elide ukutshabalalisa amaqanda ebhulogi.
Gcina ezi zinto zitywinwe kwiiggs, uze uzifake efrijini ngeentsuku ezi-5.
I-Electronics kunye nezinye izinto ezingenakukwazi ukusinda ezinjalo zokushisa kufuneka zihlolwe ngokugqibeleleyo, mhlawumbi ngaphandle okanye kwigaraji okanye kwenye indawo yendlu ngaphandle kwempahla engaphelelwanga okanye ifenitshala.
Hlola umthwalo wakho, ngokukodwa iingcezu ezisezantsi . Hlola i-zippers, i-lining, ipokotshi, kunye naluphi na umbhobho okanye udibanisa ngokucophelela ngempawu yeebhugi zokulala . Ngokufanelekileyo, kufuneka uhlambe uhlambulule umthwalo wakho. Sula umthwalo onzima wecala uze ukhangele naluphi na umgca wongaphakathi ngaphakathi.
Kutheni Amakhosi Am
I-Superorder Dictyoptera, i-Roaches kunye neMantids
Ixesha lokusebenzisa ibhobho ye-Bug ukulawula izilwanyana
UCharlie Brown Dance Step
Unkulunkulu we-Winter Solstice
Ngaba Ndifanele Ndizuze iSigqeba soLawulo loLawulo?
Indlela yokuBamba i-Canvas ye-Acrylic okanye i-Oyili
Imfazwe yaseKorea: i-Inchon Landings
I-St. Mary's College yaseMall Maryland, i-SAT kunye ne-ACT Data
Izinto Zemihla Yonke Eyona Namaqhawe Asebuntwini
Ukubhiyozela 'Ukubuyela KwiSikolo' NgeeVidiyo eziPhupha iiPower